Failed Stories | Lionslayer : The Legend
(1) Failed Unicode
ဒီနှစ် ၂၀၁၁ ကို ယူနီကုဒ်နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အားကြိုးမာန်တက်လုပ်ကြမယ်လို့ ယူနီကုဒ် Developer တွေနဲ့ Contributor တွေ ၂၀၁၀ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ အကြံပြုကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က MITP မှာ လတ်တလော တာဝန်ယူနေတဲ့ Admin တစ်ယောက်နဲ့ ပြဿနာဖြစ်လို့ MITP ကထွက်ထားတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းက တချို့က ယူနီကုဒ်နဲ့ ရေးချင်တယ်၊ MITP က ယူနီကုဒ်ကို ထောက်ခံတယ်ပြောပေမဲ့ Zawgyi-One, Zawgyi1 ကို Default လုပ်ထားလို့ အလွယ်ရေးမရတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်က Post တစ်ခုရေးပြီး ဘာမြန်မာဖောင့်ကိုမှ Default လုပ်မထားဘဲ ထားလိုက်ရင် ကြိုက်တဲ့လူက ကြိုက်တဲ့ဖောင့်နဲ့ရေးလို့ဖတ်လို့ရမယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။ ယူနီကုဒ်နဲ့ရေးချင်ရင် ကိုယ့်ဆိုက်ကိုယ်ထောင်ပြီးရေးလို့ အက်ဒမင်ကပြောလို့ အကျယ်ကျယ် မဖြစ်ချင်လို့ အဲဒီက ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း MITP မှာ ယူနီကုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးတာတွေကို ဖြေသူမရှိတဲ့အတွက် မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ပဲ အကောင့်ပြန်ဝင်ပြီး ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ တွေ့လာတာက ယူနီကုဒ်ဆိုရင် စံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာရယ်လို့ မမြင်နိုင်တော့ဘဲ ယူနီကုဒ်ရယ်၊ စံရယ် စကားတစ်ခုခုကိုပြောလိုက်တာနဲ့ တီဆားတို့သလို ဖြစ်သွားနေတာကို တွေ့ပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း မသိတဲ့လူတွေ့ရင် အလိုက်မသိ ပညာပေးချင်နေတာဆိုတော့ တောက်ညင့်ကတ်ခံရပေါင်းလည်း များပြီ။ အမှတ်မရှိ ကိုယ့်ကိုမမေးပေမဲ့ စံအရေးမကြီးကြောင်း ပြောနေတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ သွားကွန်းမန့်ပေးမိပါတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ဖောင့်အကြောင်းရောက်သွားပြီး ယူနီကုဒ်က ဘာလို့ ဇော်ဂျီအရင် မထွက်တာလဲ၊ ဘာလို့ ယူနီကုဒ်တွေ အများကြီးဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကို “သောက်” တပ်ပြီး ပြောလာတာကြောင့် ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ တစ်စုံတစ်ခုကို သတိပြုလိုက်မိပါတယ်။ ယူနီကုဒ်မအောင်မြင်ပါ။ ယူနီကုဒ်ဟာ မြန်မာတွေအတွက် ကောင်းလွန်းနေပါတယ်၊ စနစ်ကျလွန်းနေပါတယ်။ ဗြဲလရမ်းရေးတတ်တဲ့ စာလုံးပေါင်းမမှန်တဲ့ လူတွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မကိုက်ပါဘူး။ “ယူနီကုဒ်သမား” “အဲဒီအုပ်စု” ဆိုတဲ့ အမြင်ရှိနေတာလည်း စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ လက်ရှိယူနီကုဒ်သုံးနေသူ ယူဇာတွေအနေနဲ့လည်း ဒီ”ယူနီကုဒ်သမား”တွေကို အမြင်မကြည်မှုတွေ ရှိနေပြီး အချိန်မရွေး မသုံးတော့မယ့် အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။
အားလုံးက ခုချိန်မှာ ယူနီကုဒ်ကို တပြေးညီ စနစ်တကျသုံးရင် နောက်လေးငါးဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ အသားကျသွားပြီး မြန်မာစာဆိုတာ ဒီလိုပါလား ဆိုတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုနဲ့ နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် တည်ငြိမ်တဲ့ စနစ်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်မှာ သိပါတယ်။ အဲလို မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ခုလာမယ့် Windows8 မှာ Unicode ထည့်ပေးလည်း ဖောင့်ပြင်သုံးကြမယ်၊ Patches တွေလုပ်ပြီး ပါလာတဲ့ ယူနီကုဒ်ဖောင့် ပျက်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ သိပါတယ်။ ဒါက နည်းနည်း ရှေ့ရောက်နေတဲ့ အိုင်တီသမားတိုင်းပါဝင်လာရင် ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ သို့သော်…။ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဖောင့်ကိုယ်သုံးပြီး ရှေ့လျှောက်လည်း တရွတ်ဆွဲသွားနေဦးမယ်ဆိုတာ မြင်ပါတယ်။
(2) Failed Burmese
သတ်ပုံမှားတယ်ဆိုတာ အွန်လိုင်းမှာ ဆိုက်တိုင်းလိုလို ဘလော့တိုင်းလိုလို ဖြစ်နေတဲ့ ထမင်းစားရေသောက် ကိစ္စဖြစ်နေပါပြီ။ သတ်ပုံမမှားအောင် ဂရုစိုက်ပြီးရေးတဲ့ဆိုက်ဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ ရပါတယ်။ သတ်ပုံမှားလေ၊ နောက်ကြည့်တဲ့လူက လိုက်မှားလေဆိုတော့ မြန်မာအွန်လိုင်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ သတ်ပုံအမှားတွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်လို့ ပြောရင် လွန်မယ်မထင်ပါဘူး။ သတ်ပုံမှာလည်း စံရှိပါတယ်။ စံကိုလိုက်နာတာ ကိုယ့်စာပေ ကိုယ့်ဘာသာကို မြှင့်တင်ရာရောက်သလို ကိုယ့်စာကိုဖတ်မယ့် နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် သာဓကပြုစရာ အမှန်တစ်ရပ်ကို ချန်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိပြုမိသူ နည်းမယ်ထင်ပါတယ်။ သတ်ပုံအမှန်အမှားဆိုတာ မိမိရဲ့ စာပေရေချိန်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ သတ်ပုံမှန်တဲ့ စာတွေကို များများဖတ်တဲ့လူဟာ မသိစိတ်မှာ အဲဒီစာလုံးပေါင်းတွေကို ရင်းနှီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် သတ်ပုံအလိုလို မှန်လာပါတော့တယ်။ ထို့နည်းတူစွာ စာပေရေချိန်နည်းတဲ့လူတွေအတွက် အွန်လိုင်းကဖတ်တဲ့စာတွေဟာ စိတ်ထဲမှာ စွဲပြီး ရေးတိုင်းရေးတိုင်း စာလုံးပေါင်းအမှားတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အထူးသဖြင့် အွန်လိုင်းမှာ Active ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အိုင်တီသမားတွေများပါတယ်။ အိုင်တီသမားအများစု သတ်ပုံဂရုမစိုက်ကြဘူး၊ သတ်ပုံဂရုစိုက်ခြင်းဟာ မြန်မာစာကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်း ခံယူထားပုံမပေါ်ပါဘူး လို့ပြောရင် မှန်မယ်ထင်တယ်။ ဒီမိုကရေစီရဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူရင် မြန်မာစာ အရှည်တည်တံ့ဖို့ သတ်ပုံလေးတော့ မှန်အောင်ရေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်တော့ အများစုမှာ မရှိကြပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုသာ မှန်အောင်ကြိုးစားရေးကြပေမဲ့ မြန်မာစာကိုတော့ အဲလိုခံယူချက် ရှိတာနည်းပါတယ်။
မြန်မာစာကို မြတ်နိုးတဲ့ လူတစ်စုပေါင်းပြီး သတ်ပုံအမှန်ပြင်ပေးရေး ကော်မတီဆိုပြီး ဖွဲ့ထားကြပါတယ်။ ပထမတော့ တွေ့ရာနေရာမှာကွန်းမန့်ပေးပြီး လိုက်ပြင်ကြပေမဲ့ အမြင်ကတ်ခံရတာ များလာတာ​ေကြာင့် သူများကို အမှန်ပြင်ခြင်း လျှော့လိုက်ကြပါတယ်။ တလောက မြန်မာကျူတိုရီရယ်မှာ ကိုသီဟက သတ်ပုံအမှားတွေ့ရင်လည်း ပြင်ပေးပါဗျာဆိုလို့ ဝမ်းသာအားရနဲ့ ပြင်ပေးကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီလို လူဖတ်များတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုက စပြင်လို့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူတွေကို သတ်ပုံမှန်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိတာကိုး။ အမှန်ပြင်တယ်ဆိုရာမှာလည်း အမှားနဲ့ အမှန်ကို တွဲပြပြီး ကွန်းမန့်ပေးတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ အဲဒါက မြင်လွယ်ပြီး စိတ်ထဲကို ဒိုင်းကနဲ့ ရောက်သွားစေတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘာသာရပ်နဲ့မဆိုင်ဘဲ သတ်ပုံလာပြင်တာ မကြိုက်ဘူး၊ မှားလည်းအရေးမကြီး ဖတ်သူနားလည်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုး အပြောခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီစိတ်ဓာတ်ကို မကြိုက်ပါ။ ဗမာစာသည် တို့စာရယ်လို့ဖြစ်အောင် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာ ပြန်တူးဆွ ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတာ နှစ်တစ်ရာ မပြည့်သေးပါ။ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေက မြန်မာစာ ပျောက်သွားအောင်၊ ပျက်သွားအောင် တွန်းချနေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော်သွားကြည့်တော့ ကွန်းမန့်ပိတ်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် FB မှာ Status တင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပြောတဲ့ အပေါက်က အချိုးမပြေတော့ ပြဿနာမီးထွန်းရှာသလို ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကစ အကျယ်အကျယ်မငြိမ်းဖွယ်တွေဖြစ်ပြီး ညောင်မြစ်တူးလို့ ပုတ်သင်ဥပေါ်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ယူနီကုဒ်လည်း ပတ်ရမ်းခံလိုက်ရသလို “ယူနီကုဒ်အဖွဲ့” ဆိုတဲ့ အမြင်က ယူနီကုဒ်သုံးသူယူဇာတွေ ကြားထဲမှာရှိတာလည်း တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီဆိုက်အကြောင်းပြောချင်ရင် ဒီဆိုက်မှာ Contribute လုပ်မှပြောဆိုတဲ့ အမြင်ရယ်၊ သတ်ပုံပြင်ခြင်းသည် သိပ်အရေးမကြီး ဆိုတဲ့အမြင်ရယ်၊ စံတစ်ခုသတ်မှတ်သုံးစွဲစရာမလိုကြောင်းဆိုတဲ့ အမြင်တွေရယ် တွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့ စံဆိုတာရယ်၊ မြန်မာစာကို တန်ဖိုးထားဖို့ရယ်ဆိုတာတွေက ပြောသာပြော၊ ဒီဘက်နားကဝင် ဟိုဘက်နားကထွက်သွားပါလားလို့ သိလိုက်ရပါတယ်။ သူတပါးနားဝင်အောင် မပြောတတ် မပြောနိုင်၊ ပြောတိုင်းလည်း ဆရာကြီးလေသံတွေဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရေးပုံရေးပေါက်ကိုပဲ အပြစ်တင်မိပါတော့တယ်။
(3) Failed Credit
ဘာသာစကားမှာ ရင်းမြစ်ဒေတာတွေက အရေးကြီးတယ်၊ နည်းပညာက နောက်မှလာတယ်ဆိုတာ ဘာသာဗေဒကို လုပ်နေသူတိုင်းသိပါတယ်။ အခု အွန်လိုင်းမှာ ခေတ်စားနေတာ အဘိဓာန်ပါ။ ဟိုလူအဘိဓာန်လုပ်တယ်၊ ဒီလူအဘိဓာန်လုပ်တယ်နဲ့လည်း တွေ့တွေ့နေရတာပါ။ ကောင်းတဲ့စိတ်ကို အခြေခံကြပြီးလုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့ Credit ပေးဖို့ကိစ္စကိုတော့ သိပ်အရေးထားကြတာ မတွေ့ပါဘူး။ အခုအွန်လိုင်းမှာ အများဆုံး ယူသုံးနေတာက Ornagai ရယ် Saing dict က ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီက ဒေတာတွေ ဘယ်ကရလဲ ဆိုတာ အသေးစိတ် Credit ထားဖို့တော့ မေ့နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မအားကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Ant ပုရွက်ဆိတ်ဆိုတာ လူတိုင်းက ဒီလိုပဲ ပြန်မှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ပိုတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင် အဘိဓာန်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကွဲသွားမှာပါ။ အဘိဓာန်ပြုစုတယ်ဆိုတာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီပြီး ကြာတဲ့ ကိစ္စပါ။ ကိုယ်က ပြန်ကူးယူပြီးဖြန့်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်လက်ညောင်းပေမဲ့ မူရင်းပြုစုသူတွေ အဆပေါင်းများစွာ ပင်ပန်းခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိရဖို့ပါ။
အစက မပါတဲ့ စာလုံးတွေလည်း နောက်ပိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားပြီး ထပ်ဖြည့်ရင်း ကြာတော့ ဘယ်သူဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အမှတ်အသား မရှိတော့ပါ။ မူရင်း သာလွန်လား၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်စာအဖွဲ့လား စကားလုံးတစ်လုံးချင်းမှာ Ref လုပ်ဖို့ လိုတာ အမှန်ပဲ။ အကျဉ်းချုပ်မဟုတ်တဲ့ အဘိဓာန်တွေမှာ ရှုပ်ထွေးတဲ့စာလုံးတွေ၊ တခြားက ကိုးကားယူရတဲ့ စာလုံးတွေဆိုရင် အောက်မှာ footnote နဲ့ Ref တွေ ထည့်ပေးကြပါတယ်။ ကိုးကားအစုံကတော့ အဘိဓာန်နောက်ဆုံးမှာ အမြဲပါပါတယ်။ အစက ref တပ်တာကို မလုပ်ခဲ့ရင်တောင် နောက်ပိုင်းမှာ field တစ်ခုအနေနဲ့ တပ်သွားဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ သောင်းချီသိန်းချီနေတဲ့ Data တွေနဲ့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒီအတွေးတွေးမိတာကလည်း အခုရက်ပိုင်း VOA သတင်းမှာ မြင်လိုက်တဲ့ Gtalk ပါဠိ-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်ဆိုတာမှာ ဦးဟုတ်စိန်နာမည်တစ်လုံး မတွေ့မိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Prediction လုပ်တာ ဝါသနာပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီစာရေးတဲ့အချိန်ကစလို့ နောက်ဆယ်နှစ်အတွင်း ၁။ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ(အစစ်အမှန်)ရဖို့လည်းမမြင်၊ ၂။ ယူနီကုဒ်ကို လူကြိုက်များလာဖို့လည်းမမြင်၊ ၃။ မြန်မာစာစာလုံးပေါင်းလည်း ပိုမှန်လာဖို့လည်းမမြင်မိ။ ဒီယူနီကုဒ်ကိစ္စ၊ သတ်ပုံကိစ္စ၊ ဝီကီကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်း မြန်မာစာကို ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ လုပ်နေတာပါ။ အချိန်အရမ်းကုန်ပါတယ်။ အချိန်ကုန်သလောက် ရလာတဲ့ Feedback နဲ့ အမြင်တွေကလည်း အားရစရာ မကောင်းပါ။ ဒီတော့ ဒီကိစ္စတွေ (ကျွန်တော့်အနေနဲ့) မအောင်မြင်ဘူးလို့ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သုံးသပ်ပါတယ်။ မြန်မာဝီကီမှာ အားကြိုးမာန်တက် တစ်ကိုယ်တော် ကြဲခဲ့တဲ့ ကိုဟင်္သာ ဘာလို့ထွက်သွားသလဲဆိုတာ ရိပ်ခနဲ မြင်လိုက်သလို ရှိပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ကိစ္စကို လက်ရှိ Developer တွေအနေနဲ့ ဆက်လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စိတ်ပါရင် ပါသလို တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ ဒီဘလော့လေးမှာ ရေးသွားပါဦးမယ်။ ယူနီကုဒ်နဲ့ သတ်ပုံကိစ္စကိုတော့ အမြင်ကတ်ခံ လူမုန်းခံပြီး ဘယ်နေရာမှာမှ သွားရောက်ပြောကြား ကွန်းမန့်ထားတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါ။ ဒါပါပဲ။
Tags: Credit, Myanmar spelling, myanmar unicode
12 Responses to “Failed Stories”
Thawng Tunngo says:
ကျွန်တော် ယူနီကုဒ် စနစ်ကို တော်တော်ကလေးနောက်ကျမှ ဝင်လာပါတယ်…သဘောကျတယ်…ကြိုက်တယ်…ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ မကြာတော့သော အနာဂတ် (maybe5to7year) မှာ ယူနီကုဒ်သည် မြန်မာစာ စံစနစ် တစ်ခု မလွဲမသွေဖြစ်လာမှာပါ….
သတ်ပုံကိစ္စကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ထောက်ခံတယ်ဗျာ။ အင်္ဂလိပ်စာ စာလုံးပေါင်းတော့ မှန်အောင်ကြိုးစားကြပြီး ကိုယ့်လူမျိုးစာကိုတော့ ဖြစ်သလိုပေါင်းနေကြတယ်။ တချို့ဆိုရင် ညလေး (ဉ)နဲ့ အက္ခရာ ဥ ကိုတောင် မခွဲတတ်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် မြန်မာစာ ကိုတော့ ကိုယ်တွေပဲ စောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့ဗျာ။ IT-KOKO ပြောသလို အားလုံးအတူတူ ကြိုးစာရင် တစ်နေ့ ဖြစ်လာမှာပေါ့။
အချိန်တော့နည်းနည်းယူရမှာပေါ့ဗျာ။ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေ လုပ်ရင်တောင် လိုအပ်တဲ့ အချိန်တစ်ခုတော့ စောင့်ရသေးတာပဲ။ အခုဟာက သေးသေးလေးမဟုတ်သလို၊ တစ်ယောက်တည်းကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။။ အားလုံးတူတူ ကြိုးစားရင် တစ်နေ့ ဖြစ်လာမှာပါ။
Ngwe Tun says:
နောက်ဆုံးတော့၊ မြန်မာ ပရိတ်သတ်က ဗီလိန်ကားတွေရိုက်တာများလာတော့ အလွမ်းကားရိုက်ရင်လည်း ဗီလီန်လုပ်မယ်ပဲထင်တယ်။ ဟာသလုပ်ရင်လည်း မရီရတော့ဘူး။ အရှေ့ကနေဝန်း ထွက်လာတာ ကြယ်တွေပျောက်သွားဖို့လောက် ရည်ရွယ်ထားလို့မရဘူး။ အချိန်ရသလောက် ယူနီကုဒ်နဲ့ မြန်မာစာတွေအတွက် လုပ်ပေးသွားလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ လက်မခံဘူး။ အမှန်ကိုလက်မခံတာ မအောင်မြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ လူအများအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်၊ သတ်ပုံအမှန်၊ ကိုးကား/စာရေးသူကို အရေးကြီးတယ်လို့မှ မထင်တာ။ ဖိနပ်မစီးတတ်တဲ့သူတွေအတွက် ဘယ်လိုဖိနပ်မျိုးကမှ အရေးမကြီးဘူး၊ တန်ဖိုးမရှိဘူး။
@MKH, Thanks for the cheer.
@ZAM plz feel free to share.
Zaw Aung Maw says:
Bro. Can I share it with other reader?
You’re welcome. Actually, I had no intention to point out any mistakes. I just want to see the difference. Thanks for correcting the mistake as soon as I commented.
Myo Kyaw Htun says:
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိယုံကြည်ချက်ဖြင့် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် ကိုယ်လုပ်နေတာ အကောင်းအဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နေတာဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
There were reallyalot of careless mistakes. (I believe) I fixed them all. Thanks.
conclusion က “ပြောချင်ပါတယ်” နေရာမှာ စာလုံးရိုက်တာ ကျန်နေတယ်။
When I wasachild, I used to hear from my parents & their friends that our country is not deserved to have smart people inside. At that time, I thought it’s all about those people who don’t haveamindset to contribute their native country. But now, I’m about to understand why it happened.
LeaveaReply to g00gle